यो हो अमेजन कम्पनीको ‘सबैभन्दा स्मार्ट’ काम « Kakharaa
६ कात्तिक, काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् जेफ बेजोस । उनी अमेजन कम्पनीका सीईओ हुन् ।
जेफ बेजोस जब कुनै सार्वजनिक मञ्चहरुमा बोल्दछन्, तब आफ्नो मन्तव्यको अन्तिममा एउटा प्रसँग छुटाउँदैनन् । आफ्नो भाषणको अन्त्यतिर बेजोसले आफ्नो कम्पनी अमेजनभित्र रहेका केही अनुकरणीय तथा प्रेरणादायी प्रयास तथा कार्यहरुहरुको बारेमा बताउँदछन् । उनै बेजोसले एकपटक यस्तै पब्लिक फोरममा सोधियो, ‘तपाइँले आफ्नो कम्पनीमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा स्मार्ट काम के हो रु’
अमेजन कम्पनीको इतिहासमै अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा स्मार्ट काम के होला रु यो सबैको चासोको विषय नहुने कुरै भएन । तर जब बेजोसले यसको उत्तर दिए, तब सबै तिनछक परे । वास्तवमा बेजोसले जुन कामलाई अमेजन कम्पनीमा गरिएको सबैभन्दा स्मार्ट काम भएका थिए, त्यो पत्याउन गाह्रै पर्ने खालको थियो ।
बेजोसका अनुसार अमेजन कम्पनीमा पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतिमाथि रोक लगाउनु नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा स्मार्ट काम हो । जेफ बेजोसका अनुसार अमेजनमा वर्षौँ अघि नै पावरप्वाइन्ट प्रस्तुति हटाइएको हो । कम्पनीका कुनैपनि बैठक तथा छलफलमा पावरप्वाइन्टको प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
विश्वका सबैजसो कर्पोरेट अफिसहरुमा बैठकहरुको एउटा अभिन्न अंग हो पावरप्वाइन्ट प्रस्तुति । व्यवस्थापकहरुले आफ्ना कुरा राख्न, कम्पनीका बारेमा कर्मचारीहरुलाई बताउन, निर्देशन दिनका लागि मात्र नभएर कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यप्रगति तथा प्रयासका बारेमा बताउन पनि पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतिको सहारा लिन्छन् । तर अमेजनमा भने सीईओ जेफ बेजोस देखि सबैभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारीलाई समेत पावरप्वाइन्टमा अल्झिने छुट छैन ।
यहीँ पावरप्वाइन्ट हटाउनु नै सम्भवतः अमेजनमा आफुहरुले गरेको सर्वाधिक स्मार्ट कार्य रहेको जेफ बेजोसको तर्क छ । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, पावरप्वाइन्ट प्रस्तुति नहुँदा अमेजनका कर्मचारीहरुले बैठकमा आफ्ना कुराहरु कसरी शेयर गर्दछन् ? अमेजनमा बेजोसले बैठकको कस्तो नयाँ तरिका विकास गरेका हुन् त ?
यसको रोचक जवाफ छ । सिएनबिसीको एक रिपोर्ट अनुसार अमेजन कम्पनीमा जुनसुकै बैठकको सुरुवातमा ३० मिनेटको अध्ययन सत्र हुन्छ । बैठकका विषयवस्तुहरु लगायतका विषयमा तयार पारिएको ६ पेज लामो लिखित सामाग्री बैठकका सबै सहभागीलाई पढ्न दिइन्छ । त्यो सामाग्री सबैजनाले गहन रुपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ, ३० मिनेट भित्रमा ।
जेफ बेजोसका अनुसार त्यहीँ मेमोले नै बैठकमा असल बहसको अवस्था सिर्जना गर्दछ । कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिएको उक्त सामाग्री अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरुलाई आफूलाई लागेका कुराहरुको टिपोट गर्न भनिन्छ । अनि त्यसरी टिपोट गरिएका विषयहरुमा नै बैठकमा बहस हुन्छ ।
बेजोसका अनुसार बैठकको सुरुवातमा हुने यस्तो सामूहिक अध्ययन सत्रले कर्मचारीहरुलाई बैठकका क्रममा ध्यान नदिने वा निस्कृय बस्ने छुट दिदैन, किनकी सबैलाई व्यस्त रहनै पर्दछ ।
बेजोसका अनुसार बैठकमा कुनै एकजनाले प्रस्तुत गर्ने र अरुले सुन्नेरहेर्ने पावरप्वाइन्ट प्रस्तुतिमा अमूर्त जानकारीहरु समावेश हुन्छन् । तर अमेजनमा बैठकको सुरुमा वितरण गरिने मेमोचाहिँ पूरै टिमले तयार गर्दछ र त्यसमा लेखकको नाम पनि उल्लेख गरिएको हुँदैन । यस्तो मेमो लामो तयारी पछि तयार गरिएको हुन्छ ।
बेजोस भन्छन्, ‘उत्कृष्ट मेमोहरु लेखनरपुनर्लेखन गर्ने, सहकर्मीहरुमाझ वितरण गरी सुझाव माग्ने, केही दिन प्रतिक्रियाका लागि छाड्ने र अन्तिममा सम्पादन गरी अन्तिम रुप दिने गरिन्छ ।’
यो तरिकाले अमेजन कम्पनीमा बैठकको तौर तरिकामा आमूल परिवर्तन ल्याएको पनि जेफ बेजोसको दाबी छ ।